Mila fahaizana ny manasa akanjon-jazakely
Tsy mitovy amin’ny fanadiovana lamba lehibe ny fanalana ny loto amin’ny akanjon-jazakely, na tasy avy amin’ny ronono izany, na avy amin’ny sakafo voapotsitra, na ivy…
Mila fitandremana sy fahaizana manokana ny fanaovana azy, ho an’ny fahasalaman’ilay zaza vao teraka sy ho fikajiana an’ilay fitafiana mba hateza ihany koa. Raha mbola azo atao dia aleo ny tena ihany no manasa ny akanjon-jazakely.
Tsy mampiasa akora mahery
Sasana amin’ny tanana fa tsy ampidirina amin’ny masinina fanasan-damba ny akanjon-jazakely sy ny taty ary rano matimaty no tsara ampiasaina. Tsy avy dia tobahana amin’ny rano matimaty anefa, fa alona mialoha dia kosehina amin’ny tanana avy eo. Rehefa mifidy ny akora fanasana ilay lamba dia fadio ireo ahitana singa “javel”. Tsy mahazo mampiasa akora mampalefaka lamba ihany koa, satria mety hanimba ny hodi-jazakely sarotiny izy ireny. Ny tena tsara dia savony tsotra, tsy misy hanitra sady tsy be asidra no ampiasaina. Tsy dia tsara koa ny vovo-tsavony.
Manala tasina ronono
Sarotra esorina sady mety hahakomavoka ny lokon’akanjon’ny zazakely ny tasina ronono. Izao no fanadiovana azy ireny : lomana amin’ny rano mangatsiaka mandritra ny 10 minitra, ary avy eo dia hosorana « savon de Marseille » sady kosehina malefaka amin’ny tanana. Avela hilona kely indray, mandritra ny ora iray, dia kobanina tsara.
Manala tasina sakafo voapotsitra amin’ny tatin’ivy
Rehefa mihinana ireny sakafo voapotsitra sy “petit-pot” maro karazana ireny ny zazakely dia misy tasy kely ny akanjony, na ny tatin’iviny. Ny fanadiovana azy : asio alikaola 90° ny vovon-dandihazo dia apetapetaho eo amin’ilay tasy. Rehefa vontovonto kely dia kobano amin’ny rano misy “javel”. Kobanina amin’ny rano mangatsiaka indray avy eo. Tandremo tsara fa izay nodiovina tamin’io akora misy “javel” io dia tsy azo atao mikasika mivantana amin’ny hodi-jazakely.
Manala tasina maloto amin’ny taty
Vontosana ranon-tsavony malefaka efa natokana ho an’ny lamban-jazakely ny lamba vita amin’ny hasy. Iny avy eo no apetapetaka amin’ireo tasina fivalanan-drano na fivalanana tsy mety afaka eo amin’ny taty, efa avy nokosehina tanana. Raha efa izay dia alona mandritra ny 15 hatramin’ny 20 minitra ao anaty koveta kely efa nasiana rano matimaty. Raha efa izay dia kobanina.